हाम्रो प्राथमिकता कृषि र पूर्वाधार हो | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / हाम्रो प्राथमिकता कृषि र पूर्वाधार हो
हाम्रो प्राथमिकता कृषि र पूर्वाधार हो
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता August 1, 2018	0 292 Views
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको वर्षदिन काटिसक्यो  । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिको अभाव खे पे का नागरिकले नया जनप्रतिनिधि आउदा ठूलो अपे क्षा गरे का थिए । तर जनप्रतिनिधिसगै आएको स्थानीय सरकारकोव्यवस्थापनमा तारतम्य नमिल्दा जनअपे क्षाअनुसारको काम गर्न नसके को प्रष्ट दे खिएको छ । समस्याकै बीचमा पनि थुप्रै नमूना काम पनि भएका छन् । लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसी सग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले बिते को एक वर्षको गतिविधिस“ग सम्बन्धित भई गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । – सम्पादक
बिते को एक वर्ष सम्झनलायक रह्यो कि ?
सम्झनलायक नै छ । खासगरी चुनावमा जनताका माझमा हामीले गरे का प्रतिबद्धता, घो षणापत्रअनुसार पूरै काम गर्न सकिने कुरा त भएन, तर पनि हामीले जति प्रतिबद्धता गरे का थियौ ं त्यति सबै काम गरिसक्यौ ं भन्ने पक्षमा हामी पनि छै नौ ं । जति पनि प्रतिबद्धता हामीले गरे का छौ ं त्यो काम पूरा गनेर् आधार तय गनेर् काम हामीले एक वर्षमै गरे का छौ ं । हिजो हामीले दूरदराजका वस् तीलाई लमही बजारस“ग जो ड्ने काम गछौर् ं र त्यहा“का वासिन्दालाई सिटामो लसम्म नपुगे को अवस् थामा हामीले पु¥याउ“छांै भने का थियौ ं । आज न्यूनतम सुविधा पूरा गरे का छौ ं । अहिले नगरका प्रत्ये क टो ल बजारस“ग जो ड्ने काम गरिएको छ ।
नगरको विकट क्षे त्र मानिने शीतलापुर बौ राहा क्षे त्रमा हामीले पहिलो वर्षमै ५० लाख बजे ट हाल्यौ ं र सडक, बत्ती पु¥याउने काम गरे का छांै । जसले पानी लिफ्टिङ गनेर् कामको थालनी हु“दै छ । त्यसअन्तर्गतका टो लहरुमा बाटो विस् तारको काम अझै बा“की छ । त्यसै गरी स् वास् थ्यको अवस् था सुधारमा पनि हामी लागे का छौ  । वडा नं. ४, ९ मा नगर स् वास् थ्य क्लिनिक सञ्चालन गरे पछि हिजो सिटामो लसमे त पाउन नसक्ने ठाउ“मा उपचार से वा प्रवाह गरिएको छ । यस् तै नगरको महत्वपूर्ण विषय भने को चक्रपथ यो जना नै हो  । हामीले दामो दर मार्गलाई नै चक्रपथको रुपमा विकास गर्न सकियो भने लमहीलाई ठूलै परिवर्तन गर्न सक्छौ भन्ने मान्यताका आधारमा डिपिआर तयार भइसके को छ । ट्रयाक खो ल्नका लागि प्रक्रिया अघि बढिसके को अवस् था छ । शिक्षाको क्षे त्र, बाटो कालो पत्रे लगायत जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि थुप्रै काम गरे का छौ ं ।
हामीले यो एक वर्षमा गर्न नसके को के हो भने किसानहरुका लागि खासै नमूना काम गर्न सकिएन । भौ तिक पूर्वाधारतर्फ ध्यान गयो भने यसपालि किसान के न्द्रित कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौ ं । यो वर्ष किसानको वर्ष हुने छ । जति एक वर्षमा गर्नुपनेर् हो त्यो गर्न सकियो कि सकिएन तर असन्तो ष मान्नुपनेर् कुनै ठाउ छै न । घर बनाउदा जगको काम बाहिर दे खिदै न घर बनेपछि मात्र काम गरे को दे खिन्छ हामीले पनि यसपालि जग बसाल्ने काम गरे का छौ ं अब दे खिने गरी काम हुन्छ ।
अघिल्लो वर्षका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन भए त ?
हामीले प्रस् ताव गरे का ९५ प्रतिशत यो जना कार्यान्वयन भइसके का छन् भने बाकी पाच प्रतिशत यो जना कार्यान्वयन गर्न सकिएको छै न । शतप्रतिशत काम गनेर् भन्ने गाह्रो कुरा रहे छ । हामीस“ग पर्याप्त जनशक्ति थिएन । प्राविधिक थिएनन् । त्यही भएर के ही काम हुन नसके पछि जति गरिएको छ ती काममा हामी मात्रै हो इन जनता पनि सन्तुष्ट भएको मै ले पाएको छु । के ही नमूना काम भन्दिनु न ।
लमही नगरको मात्रै नभएर दाङकै गौ रवको क्षे त्र जखे राको विकासका लागि त्यसको गुरुयो जना निर्माण गरिएको छ । हामीले त गुरुयो जना कार्यान्वयन गरे पछि हाम्रो आम्दानीको मुख्य स्रो तकै रुपमा लिएका छौ ं । त्यसै गरी धार्मिक पर्यटकीय स् थल रिहारको पनि गुरुयो जना तयार गरे का छौ ं । प्रदे श सरकारले पनि त्यसमा बजे ट विनियो जन गरे को अवस् था छ । बाटाघाटाको कुरा गनेर् हो भने बाटो बिनाका टो लहरु छै नन् । यस् तै चक्रपथ, स् वास् थ्य संस् थाहरुलाई वडा–वडामा लै जाने काम गरे का छौ ं । हाम्रो एक वर्षे कार्यकालमा भएका के ही काम यी हुन् र थुप्रै यस् ता कामहरु भएका छन् । त्यस् तै लमही बजारलाई सरसफाइयुक्त बनाउने काम हामीले गरे का छौ ं । प्लाष्टिकजन्य वस् तुको प्रयो ग नगनेर् र दुना, टपरीजन्य वस् तुको सदुपयो ग गरे र घरे लु उद्यो गहरुलाई पनि प्रो त्साहन गनेर् काम हामीले गरे का छौ ं ।
नराम्रा काम पनि उत्तिकै भए ?
वास् तवमा लमही नगरपालिकाले गर्न नसके को काम के हो भने आफूले गरे का कामका विषयमा के ही गलत ढंगले प्रचार भइरहे का छन् । यसलाई चिर्न सकिएको छै न । यही पत्रिकामार्फत म नगरवासीहरुमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने लमही नगरपालिकाका विरुद्धमा जसरी सो सल मिडियाहरुमा प्रचार गरिएको छ यी सबै तथ्यहीन छन् । लमही नगरपालिकाले अवै ध नदीजन्य वस् तु उत्खनन् कार्य रो क्ने काम ग¥यो । त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिलाई नै हतो त्साहित गनेर् हिसावले राति–राति छापा मार्नु हुन्थे न भन्ने कुप्रचार भयो  । पछिल्लो चरणमा विपत व्यवस् थापन गर्न राप्ती पुल नजिकै जहा“ एक हजार विगाह जमिन नदीले नो क्सान बनाएको छ त्यसलाई जो गाउनका निम्ति धार परिवर्तन गराउन सक्दा पा“चसय विगाह जमिन बचाउन सकिन्छ भने र काम थालिएको थियो  । त्यसमा पनि लमही नगरपालिकाले आर्थिक प्रलो भनमा यस् तो काम ग¥यो भन्ने लान्छित गनेर् काम भयो  । म यही पत्रिकामार्फत भन्न चाहन्छु कि हामी नदीजन्य वस् तु उत्खनन् नियमन गनेर् काममा हामी त्यतिबे ला थिएनौ ं । सबै काम जिससले हे रिरहे को थियो  । हामी त स् थानीयवासीको हिसावले जमिन निकास् न सकिन्छ कि भन्ने हिसावले काम गर्न प्रे रित ग¥यौ ं र चो री निकासी हुन नदिन अख्वारीको काम पनि ग¥यौ ं । तर यसमा पनि तथ्यहीनरुपमा लान्छित गनेर् काम भयो  । पछिल्लो चरणमा नगरपालिकाअन्तर्गत कृषि शाखाले डगट्रयाप निर्माणमा ८० हजार विनियो जन भएको र प्राविधिकले ६८ हजारको स् िटमे ट गनेर् काम गरे को मा सो ही अनुसार खो र तयार गरिएको छ ।
त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भयो भने र निकै उछाल्ने काम भयो  । यदि अनियमितता छ भने विल, भर्पाई, स् िटमे ट र भुक्तानीको अवस् था हे रे भइहाल्यो  । सरकारी दरभाउ रे टअनुसार नै काम भएको छ । जुन हिसावले अफवाह फै लाइएको छ, त्यो प्रतिशो धपूर्ण छ । नगरपालिकालाई बदनाम गराउने काम भएको छ । यो कामको सत्यतथ्य बुझ्ने काम नगरे रै पूर्वाग्रहीढंगले बदनाम गनेर् काम भएको छ । यदि बदमासी भएको छ भने नगरवासी आएर निगरानी गर्नुस, त्यो अधिकारनगरवासीहरुसग छ, हो इन भने पूर्वाग्रही हिसावले जनप्रतिनिधि र नगरपालिकाकै बदनाम गराउने काम ठीक हो इन । चित्त बुझ्दै न भने अख्तियारमा उजुरी दिनुस् ।
वडामा जाने बजे ट नै रो क्न खो ज्यो भने र वडा अध्यक्षहरुले नगरसभा अवरुद्ध गरे । त्यो पनि पूर्वाग्रही हो ?
कार्यपालिकामै छलफल नगरे र नगरसभामा नीति कार्यक्रम लै जान लाग्यो भन्ने उहा“हरुमा भ्रम थियो , मै ले उहा“हरुलाई प्रष्ट भनें कि स् थानीय तह कार्य सञ्चालन ऐ न २०७४ अध्ययन गर्नुस् । त्यहा“ कार्यपालिकाले पास नगरे का विषयहरु नगरसभामा लै जान पाइने छै न भने र स् पष्ट ले खे को छ । उहा“हरुलाई भ्रम प¥यो कि नियो जित हो उहा“हरुलाई कार्यपालिकामै छलफल नभइ सभामा जान लाग्यो भने र सभा वहिस् कार गनेर् काम गर्नुभएको हो  । असार १० गते सम्म नगरसभा शुरु गर्नुपनेर् थियो  । कार्यपालिकामा के कुरा छलफल भएको थियो भने नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक विधे यकमाथि मात्रै छलफल गरे र पास गरिएको थियो र बजे टमाथि छलफल भएको थिएन । त्यसै ले हामीहरुबीच के समझदारी भएको थियो भने १० गते उद्घाटन र नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक विधे यक पारित गरौ ं । त्यसपछि ११ दे खि १६ गते सम्म हामी कार्यपालिकाको बै ठक बसांै ला । किनभने पहिले विभिन्न कार्यक्रमले समय मिले न । त्यही समयलाई व्यवस् थापन गरे र कार्यपालिकाको बै ठक बसे र टुंगो लगाउ“ला भन्ने छलफल भएको थियो  । १७ गते नगरसभा बसे र सक्ने सबै को यो जना थियो  । बीचमा धान दिवस भयो । १६ गते बै ठक शुरु हुनै लाग्दा सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डित ने पालगञ्ज आउनुभएको र ५, ६ र ७ प्रदे शका स् थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बो लाएपछि बै ठक स् थगित भयो भने र हामी त्यतातिर लाग्यौ ं । हाम्रो कमजो री के भयो भने के कारणले बै ठक स् थगित भयो भन्ने बारे मा प्रष्ट नपारे रै ने पालगञ्ज जा“दा उहा“हरुलाई के प¥यो भन्दा खे री बै ठकलाई महत्व नदिएर घुम्न गएको भन्ने हिसाबले त्यो काम गर्नुभएको रहे छ र पछि त्यो कुरा थाहा पाइसके पछि तुरुन्त फिर्ता लिएर नगरसभा सम्पन्न भयो  । त्यसै ले बाहिर भने जस् तो बजे ट रो के को भन्ने कुरा गलत हो  ।
नया नीति कार्यक्रम आइसके का छन् प्राथमिकता के हो ?
अबको प्राथमिकता भने को शिक्षा, स् वास् थ्य र कृषि नै हो  । अघिल्लो वर्ष पूर्वाधारलाई बढी जो ड दिइएको थियो  । वास् तवमा हाम्रो दे श कृषिप्रधान दे श मानिन्छ । धे रै जसो कृषिमा आधारित छन् । तर किसानको पे शालाई मर्यादित बनाउन सकिएको छै न ।
कृषिलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउन सकिएको छै न । वर्षदिनभरि खे तिपाती गर्छ उसलाई खानलाउन नै पुग्दै न । त्यसलाई आयआर्जनस“ग जो डे र कसरी उत्पादन लागत घटाउने र आयआर्जन बढाउने भन्ने विषयमा हामीले कार्यक्रम तय गरे का छौ ं । सानो सानो स् के लमा खे ती गर्दा निर्वाहमुखी मात्रै भयो  । कम्तिमा चक्लाबन्दी गरे र उत्पादन गर्न सकियो भने मात्रै किसानको जीवनस् तर बृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले सो ही अनुसारको बजे ट ल्याएका छौ भने त्यस्तै पर्यटन पनि हाम्रो प्राथमिकताकै विषय हो  । हामीसग जखे रा, रिहार, शीतलापुर बौ राह क्षे त्रलाई पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास गर्न सकियो भने किसानको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
कर बढाए से वा बढाएनन् भन्छन् त ?
लमही नगरपालिकामा कर धे रै भयो कि भन्ने गुनासो मै ले पनि सुने को छु । खासगरी मालपो तको रे ट अलि व्यावहारिक भएन कि भन्ने म आफै लाई पनि लागे को छ । तर यो सबै करको सिलिङ हामी आउनुभन्दा अघि नै सर्वदलीय संयन्त्रले निर्धारण गरे को रे टलाई नै गतवर्ष हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका हौ ं । तर म आफै पनि दे शका विभिन्न तहमा गएर करको विषयमा बुझने प्रयास गरे को छु । ती क्षे त्रका करको रे ट भन्दा लमहीमा धे रै भएको यथार्थ हो  । यसमा जनताले भने को कुरामा सत्यता छ । तर अन्य करका क्षे त्रमा लगाइएको कर स् वाभाविक छ । अझ यसपालिदे खि एकीकृत सम्पत्ति कर अनिवार्य गरिएको छ । यसले पनि थप पीडा त हो ला । तर विस् तारै यो समस् या सामान्य बन्दै जाने छ । अकोर् कुरा यहा“हरुले तिरे को करले यहा“हरुकै क्षे त्रमा विकास गनेर् हो  । अन्यत्र जाने छै न ।
तपाइहरुले लक्षित वर्गको बजे ट कटौ ती गर्नुभो नि ?
हो  । हामी भर्खर निर्वाचित भएर आएका थियौ ं । चुनावमा हामीले धे रै ठाउ“मा काम गछौर् ं भने र प्रतिबद्धता पनि गरे का
थियौं । त्यसलाई मिट गर्न हामीले लक्षित वर्गको बजे ट तलमाथि गरे कै हो  । अहिले पनि सो चे जति बजे ट विनियो जन हुन सके को छै न । तर हामीलाई के थाहा छ भने भौ तिक विकास मात्रै विकास हो इन, मानवीय विकास पनि विकास हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरे र काम गर्न हामी लागे कै छौ ं । अकोर् वर्षदे खि यो गुनासो सुन्ने अवस् था आउने छै न ।
पाच वर्षमा कस्तो बनाउने भन्ने सपना छ तपाइको ?
अवश्य पनि छ । लमही नगरपालिकाको बासिन्दा हुन गर्व महसुस गनेर् खालको काम गनेर् यो जना हामीस“ग छ । स् थानीय सरकारले राम्रै काम गरे को छ भन्ने अवस् थामा लै जान तयार छौ ं । शुरुका दुई वर्षसम्म त गुनासो आइहाल्ला किनभने हामीले दुई वर्षमै सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्दै नौ ं नै  । तर त्यसपछि जनताले अनुभूति गनेर् खालको काम हामीले गछौर् ं । यो नगरपालिकालाई अन्य नगरपालिका भन्दा नमूना भएको अनुभूति गराउन हामी लाग्ने छौ ं ।
Previous: मब क्याम्पसले यसै वर्षदेखि बिबिए सञ्चालन गर्ने
Next: तुलसीपुरमा हरियाली प्रबद्र्धन जारी
जीवनोपयोगी र व्यावहारिक शिक्षा नै खास ब्राण्ड हो
सबै मिलेर देशका लागि काम गर्नुपर्छ